उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टका पिएको रजाइँ : दशैं मनाउन सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग ! | Diyopost
काठमाडौं, ६ असोज । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टका एक स्वकिय सचिवले सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।
दशैंमा घर जानका लागि उनले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बालाजुको गाडी लिएर कैलाली पुगेको पाइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटिड भित्र चरम आर्थिक हिनामिना गर्दै आएका अध्यक्ष नन्द किशोर बस्नेतले मन्त्री भट्टको चाकडीका लागि मन्त्रीका आसेपासेलाई सरकारी गाडी उपलब्ध गराएको पाइएको हो ।
मन्त्रीका पिए हितेश ओझाले क्षेत्रका अध्यक्ष बस्नेतले चढ्दै आएको बा १ ञ २०९४ नम्बरको स्कोरपीओ गाडी उपलब्ध गराएको पाइको छ । बस्नेतले आफ्नो आर्थिक अपराध ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीका आसेपासेलाई सरकारी सम्पत्ति बुझाएर चरम दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री भट्टका अर्का स्वकिय सचिव मिन बहादुर सिंहका अनुसार ओझा असोज ३० गते नै कैलाली हिँडेका हुन् ।
दियोपोस्टको सम्पर्कमा आएका ओझाले आफूलाई मन्त्रालयले नै गाडी उपलब्ध गराएकोले कुन गाडी कसको भन्ने विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । यद्धपी मन्त्रीका पिएहरुलाई घरसम्मै सरकारी गाडीले दशैं मनाउन पुर्याउने व्यवस्था भने नरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
‘अनुगमन गर्न गएको हुँ’ : ओझा
दियोपोस्टसँगको कुराकानीमा भट्टका स्वकिय सचिव ओझाले आफू अनुगमनका लागि कैलाली गएको झूटो बयान दिए । आफ्नो घर कैलालीको अत्तरिया रहेको र बाटोमा मलको अनुगमन गर्दै आएको उनले बताए । अनुगमनमा गएका भनिएका उनलाई पुर्याउन गएको गाडी भने काठमाडौं फर्किइ सकेको छ ।
मलको अनुगमन गर्न औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्षकै गाडी किन लानु भयो भन्ने दियोपोस्टको प्रश्नमा भने उनले चित्त बुझ्दो उत्तर दिन सकेनन् ।
मलको विषयमा अनुगमन गर्ने अधिकार कृषि मन्त्रालयलाई मात्रै भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै प्रवक्ता सहसचिव डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले बताए । उद्योग मन्त्रालय मातहत बजार अनुगमनका लागि भनेर मन्त्रालयले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नै खडा गरेको छ । यद्धपी मन्त्रीका सचिवलाय सदस्यले पनि स्थानिय प्रशासनको समन्वयमा अनुगमन गर्न सक्ने प्रवक्ता रेग्मी बताउँछन् ।
तर, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले आफूहरुसँग कसैले समन्वय नगरेको बताए । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै अगुवाईमा नियमित अनुगमन भइरहेको बताए ।
‘मलाई त्यो गाडी नै थाहा छैन’ : बस्नेत
यता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बालाजुका अध्यक्ष नन्द किशोर बस्नेतले भने आफूलाई बा १ ञ २०९४ नम्बरको गाडीको विषयमा केही थाहा नभएको र आफुले समेत चढ्ने नगरेको बताए । तर, स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बस्नेतले आफुले भने बलाजुस्थित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका विभागिय प्रमुख सञ्जय मानन्धरको बा १ ञ १७३० नम्बरको गाडी लिएर दमक पुगेका छन् ।
नर्भिकमा विरामी पर्यटकमाथि ज्यादती : श्रीमतीमाथि बलात्कार प्रयास, श्रीमानबाट २७ लाख असुली !
आयल निगममा ‘भ्रष्टाचार’को चाङ : १२ करोडको रिफ्युलर खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनको ‘धज्जी !